Kungani i-Google Chrome izovimba ezinye izithombe namavidiyo ngokuzenzakalela - I-T michoro RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM »Kungani i-Google Chrome izovimba ezinye izithombe namavidiyo ngokuzenzakalela
Ekubuyekezweni kwe-Chrome okuzayo, i-Google izokwethula imithetho emisha yezinto ezithile ezilayisha kumakhasi e-web, njengezithombe namavidiyo. Uma lezi zinto zingaphephile, isiphequluli sizazivimba ngokuzenzakalelayo.
I-Google isebenza kanzima ukuvikela iwebhu. Kusukela i-2013 kanye nezambulo ze-Snowden, kuyacaca ukuthi i-net giant ihlanganisa ithonya layo ukuze unciphise ukuxhumana ngaphandle kokubethela (HTTP). Kuthathwe izinyathelo ezahlukahlukene ukukhuthaza amasayithi ukuthi ashintshele ekuxhumekeni okuphephile (i-HTTPS), esungula isiteshi esiphephile nomsebenzisi.
Ku-2014 ngokwesibonelo, iGoogle yenze lokhu kuvikela inkomba yokubonisa inkomba kwinjini yayo yokusesha. Inkampani yaseMount View nayo isebenzise isiphequluli sayo sewebhu, iGoogle Chrome, ukuvimbela ngokucacile abasebenzisi be-Intanethi lapho beya amakhasi ngaphandle kokubethela koxhumano. Isixwayiso sokuthi inkampani yaseMelika kuqiniswa nesikhathi.
Ezinye izithombe noma amavidiyo angeke asalayisha nge-Chrome 81.
Lo mzamo uzoqhubeka nezinhlobo ezintathu ezilandelayo ze-Google Chrome. Ekuqaleni kuka-Okthoba, kudalulwe imephu yomgwaqo ukudingida lokho i-Google ehlela ukukwenza mayelana "nokuqukethwe okuhlanganisiwe" - okuqukethwe (njengezithombe, amavidiyo, amafayili omsindo, imibhalo noma iframes) elilayishwe ku-HTTP amakhasi kepha ku-HTTPS.
Inselelo ukuphepha kwabasebenzisi be-Intanethi. Inkampani yaseMelika isusa isimo lapho umhlaseli efihla khona isithombe seseshadi lemakethe yamasheya ukukhohlisa umtshalizimali. Okunye isizathu kumlayezo othunyelwe kumsebenzisi, ngoba ekhasini eliphephile kufanele, kepha elingaphephile ngokuphelele, ngenxa yezinto ezifakwe ngaphandle kokuphepha.
Inguquko ngezigaba ezintathu
Kusuka ku-Chrome 79, okuyi ihlelelwe uDisemba 10I-Google izothumela isilungiselelo esisha esizovumela umsebenzisi ukuthi avulele okuqukethwe okuxubekile kumasayithi ayithandayo. Lokhu kulungiselelwa, kufinyelelwa kwisithonjana sokukhiya eceleni kwebha yekheli, kuzoba yimibhalo, iframes, nokunye okuqukethwe i-Chrome esivele ikuvimba ngokuzenzakalelayo.
Ngokukhishwa okulandelayo, i-Chrome 80, elindelwe ngoFebhuwari 4 2020, ukuguqulwa kuzoqhubeka ngokuqondisa izinsiza zomsindo nevidiyo. Isiphequluli siyozama ukulayisha ku-HTTPS futhi, uma sehluleka, kuzobavimba ngokuzenzakalelayo. Futhi, abasebenzisi bazoba nokufinyelela kuzilungiselelo ezichazwe ngenhla uma bafuna ukuzibonisa. Izithombe ngeke zithinteke, kepha i-Chrome izoveza isexwayiso.
I-Google isebenza le rocker izinyanga eziningi. // Umthombo: Numerama
Kuku-Chrome 81, okuzofika ngesikhathi sentwasahlobo, ukuthi icala lezithombe lizosetwa. I-Google izosebenzisa iresiphi efanayo: izozama ukuyilayisha ku-HTTPS. Uma kwenzeka wehluleka, uzovinjwa ngokuzenzakalelayo. I-Chrome 81 izomaka ukuphela kwale switch. Empeleni, i-Google ibonakala sengathi icabanga ukuthi lokhu blockage ngeke kuphazamise ukubonisa amawebhusayithi, ngenxa yokulayisha okuphoqelelwe ku-HTTPS.
Ngaphezu kwalokho, ukubethela kokuxhuma sekuyinto evamile kuwebhu. Ekhasini elizinikezeleI-Google ikholelwa ukuthi iziza ezinkulu kakhulu ze-90 100 emhlabeni, ngaphandle kwakhe, zinikela ngezixhumanisi eziphephile. Futhi lawa masayithi ayikhulu enza i-25% yethrafikhi yewebhu yomhlaba. Ekugcineni, umnqamulajuqu oshiywe i-Google kanye nenqubekela phambili yemithetho yesikhathi esizayo kokuqukethwe okuxubile nakho kuzonciphisa ukuqhekeka, kushiye isikhathi sokuthi amasayithi azivumelanise nalesi simo esisha.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/567834-pourquoi-google-chrome-va-bloquer-par-defaut-certaines-images-et-videos.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567834